Assignment Help, Cloud Based ERP System, Microsoft NAV Certification » Tea Break » Entertainment » Poems, Songs & Stories » भर्जीनिया ,मनासस
1 भर्जीनिया ,मनासस on 3rd April 2009, 12:19 pm
म आज धेरै नै खुशी छु । एस्तो कर्म भुमी मा बसेर आफ्नो जीवन को आमुल्य समय आफ्नो भान्जा भान्जी सित बितौउन पाउदा शायद कमै मान्छे दुखी हुन्छ होला । आफ्नो देश आफ्नै भेस आफ्नो मातो आफ्नो मान्छे । यि कुरा सधैं बिचार गर्नु पर्छ । मेरो nijgadh मा बस्ने एक नाथ सिग्देल हजुरबुवाले सधैं बिहान बिहान उठेर सिलोक सुनाउनु हुन्थ्यो । मान्छे ले आफ्नो पन कहिले पनि बिर्सनु हुन्न नत्र माटोले हाम्लाई धिकार्छ । तपाईं हरु सबैलाई थाहै होला तल्बार भन्दा कलम बलियो हुन्छ भनेर । जिन्दगीमा दु:ख कस्लाई हुँदैन । सबैलाई हुन्छ । तर दु:ख बाट भागेर जन मिल्दैन । प्रोपोज गर्दा रिजेक्ट कस्लाई हुँदैन र , सुखी सम्पन्न भएर कस्लाई बाँच्न मन हुँदैन र ?
मलाई त भन्नु हुन्छ भने संसार भरी को मान्छे लाई साथी बनाउन मन लाग्छ । भगवान ले दिएको हरेक कुर सिक्न मन लाग्छ । सबै सित राम्रो सम्बन्ध राखन मन लाग्छ । जिन्दगीमा मरेर लानु के छ र ? म चाहन्छु मैले लेखेको कुरा हरेक नेपाली ले सुनोस र बुझोस् कि जिन्दगी भनेको आखिर के हो ? तिमी गर्छु मात्र भन दुनियाँले तिम्लाई सहयोग गर्छ । सधैं आर्काको दास बनेर हम्लाई बस्नु त पक्कै छैन होला ।
धेरै कुरा छ जिन्दगीमा जुन सुरुमा सुन्दा भन्दा बुझिदैन तर त्एस्लाई गहिरिएर सोच्ने हो भने त्यो निकै रमाइलो हुन सक्छ एक नयाँ नेपाल बनाउन एक नयाँ आयम कयम गर्न । देश को धद्कन भनेको हामी युवा हो । हामी धद्केनौ भने हाम्रो शरीर जुन हाम्रो देश हो त्यो जिबित हुन सक्दैन । हामी हाम्रो देश आफ्नै तरिकले बनाउन चाहन्छौ । हामी हाम्रो आमालाई हसाउन चाहन्छौ कहिले दुई सब्ध कबित लेखेर कहिले अरु काम गरेर तर आसफल हुन्छउ अनी त्एस पछी सबै काम गर्न छोड्छौ । हाम्रो बिबस्ता । हाम्रो कम्जोरी ! के गर्ने हामी रुन्छौ र रुवाउछौ। म मेरो लेख बाट ...........
2 Re: भर्जीनिया ,मनासस on 9th April 2009, 10:23 am
Nice to hearaword country Nepal from you.